Best Infinity Pools in Myanmar 2020 - LODGGY
Infinity Pool လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်စိထဲမှာ အဆုံးအစမဲ့ ရေပြင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်မိမှာပါ။ အခုဒီ list ထဲကဟိုတယ်တွေက ဆုံးအစမဲ့ရေပြင်ရယ်၊ နောက်ခံအလှတရားတွေ – တောင်တန်း၊ ပင်လယ်ပြင်၊ မြို့ပြ စတဲ့အလှတရားတွေ အပြည့်အဝ ခံစားရမှာပါ။ ဒီထဲက အကြိုက်ဆုံးဘယ်ဟိုတယ်လဲ ?
A post shared by Wei_Traveler (@wei_chihao) on Mar 16, 2020 at 11:38pm PDT
မြန်မာပြည်ရဲ့ luxury market ကိုနောက်ဆုံး ဝင်ရောက်လာတာတော့ ၅ star အဆင့် Rosewood Yangon ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တရားရုံးချုပ်ကို အကြီးစားပြင်ဆင်မွန်းမံပြီး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ Infinity Pool, Gym ရှိပါတယ်။ Infinity Pool ကနေဆို ကမ်းနားလမ်းတခုလုံး၊ ဒလတဖက်ကမ်းကိုလှမ်းမြင်နေရပါမယ်။ ညနေ နေဝင်ချိန်အလှဆုံးပဲ။
A post shared by Bes (@besmee) on Jan 31, 2020 at 4:23am PST
ရန်ကုန်ရဲ့ နာမည်ကြီး Junction City Shopping Mall နဲ့အတူတွဲဖွင့်ထားတဲ့ Pan Pacific Hotel ကတော့အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ Pan Pacific ရဲ့ Infinity Pool ကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကားလမ်းမတဘက်က Holy Trinity ဘုရားကျောင်း၊ အဝေးမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားလှမ်းမြင်နေရမှာပါ။
Could get used to this view everyday 💙
A post shared by Shar Lei Yee (@sharleiyee) on Oct 27, 2019 at 5:10pm PDT
2019 မှဖွင့်ထားတဲ့ Hotel The Haven က မန္တလေးရေစစ်ကန်နားမှာပါ။ သူရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် rooftop infinity pool & bar ကနေ မန္တလေးတောင်ကြီးကို လည်း လှမ်းမြင်ရတော့ ဓာတ်ဖမ်းလို့နေရာကောင်းပေါ့။
A post shared by Gonnshainwinnthtal (@gonnshainwinnthtal) on Jun 16, 2019 at 6:30am PDT
ဒီ ဟိုတယ်ကတော့ တည်းခိုသူတိုင်းအကြိုက်တွေတဲ့ ဟိုတယ်လေးပါ. ဟိုတယ်ရဲ့ rooftop pool / bar မှာ အေးဆေးအနားယူပြီး မန္တလေးမြို့ ရှုခင်းကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ နေရာကလည်း အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာပါ.. ဟိုတယ်ကနေ ဈေးချိုကို လမ်းလျှောက် အကွာဝေး / မန္တလေးနန်းတွင်း ၊ မန္တလေးတောင်၊မဟာမြတ်မုနိဘုရား ကို ကားနဲ့ ၅ မီနစ်ခန့် ဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဟိုတယ်လေးကတော့ နာမည်အတိုင်း မန္တလေးကျုံးရဲ့ လမ်းတစ်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်ကို မြန်မာမှုလက်ရာတွေ အတိုင်းဆောက်လုပ်ထားပြီး ဖွင့်ထားတာမကြာသေးတဲ့ အသစ်စက်စက်ဟိုတယ်လေးပါ။ အခန်းတွင်းက ရှုခင်းတွေ အပြင် သူရဲ့ rooftop pool က မန္တလေးကျုံးကို လှမ်းမြင်ရတော့ နေဝင်ချိန်မှာ ကျုံးနောက်ခံနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းလို့ကောင်းတာပေါ့။
ဒီဟိုတယ်ကတော့ သူရဲ့ မြန်မာမှု ရှေးလက်ရာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် ဓာတ်ဖမ်းသူရော/ တည်းခိုသူရော များပါတယ်။ ဘန်ဂလို အခန်း / အထပ်မြင့်အခန်းပုံစံ နှစ်မျိုးလုံးပါရှိပြီး rooftop pool/ restaurant လည်းပါရှိတော့ မိသားစုလိုက်အပန်းဖြေ အနားယူဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။တည်နေရာကလည်း မန္တလေးနန်းတွင်း ၊ ကျုံးတဲ့နဲ့ အနီးတဝိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ ပုဂံမြို့ဟောင်းထဲမှာဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကိုမေးတင်ကာဆောက်ထားပါတယ်။ အခန်း ၁၄ ခန်းပဲပါလို့ အရမ်းPrivate ဖြစ်တယ်။ Infinity Pool ကနေဆို ညနေနေဝင်ချိန်အပြည့်ခံစားလို့ရပါမယ်။
A post shared by @followkk on Mar 3, 2019 at 6:52am PST
ဒီဟိုတယ်ကတော့ ပုဂံကဟိုတယ်တွေထဲမှာ အလှဆုံး မြင်ကွင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နေရာပါ။ ရေကူးကန်က ၂ ခုရှိပါတယ်။ Lake View ဘက်ခြမ်းရေကူးကန်ကတကယ့်ကို ကြီးပြီး ဘောလုံးတွေတက်တဲ့ ရာသီချိန်ဆို တကယ့်ကိုအရမ်းလှတယ်။
A post shared by ❤Myat Hmue Hay Thi (JINNY) (@myathmue.mhht) on Jul 16, 2019 at 6:30pm PDT
Bagan Umbra ဟိုတယ်လေးက ဝက်ကြီးအင်းကျေးရွာ၊ ပုဂံမြို့ဟောင်းနဲ့ ညောင်ဦးကြား အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။ ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးထဲမှာရေကူးကန်ကျယ်ကြီးရယ်၊ ရေကူးကန်ဘေးမှာတော့ညစာစားဖို့နေရာလေးရယ်၊ ပန်းခြံကျယ်ရယ် တကယ့်ကိုစိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ pool ကနေဆို ဘုရားတွေကို လှမ်းမြင်နေရပြီး ညနေပိုင်း လှပတဲ့ ရှုခင်းနဲ့ ရေကူးအပန်းဖြေလို့ကောင်းတယ်။
ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္ခ်င္စရာ ေတြခ်ည္းပါပဲ … မင္းရွိေနလို႔ ဆက္ၿပီး ရွင္သန္ခဲ့ပါတယ္ … မင္း ရွိေပးေနလို႔ … ။ ။ #cr #the#day#memories#not#just#a#day#all#memo#always#with#you#insta#instalove#instagram#instatrip#instamemories#photography#photooftheday#photoofthetrip#montpopa#😍
A post shared by @ __kwt__.__ on Feb 3, 2019 at 7:13pm PST
ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကို အေးဆေးခံစားကြည့်လို့ရတဲ့ View Point ကြောင့်လူတိုင်းလာတဲ့ဟိုတယ်ပါ။ ညနေပိုင်းဆို ဟိုတယ်ရဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ရေစိမ်ရင်း ပုပ္ပါးတောင်ရဲ့ ရှုခင်းကို ခံစားရင်း အပန်းဖြေလို့ရပါတယ်။ တချို့အချိန်တွေဆို မြူတွေဆိုင်းနေရင် တိမ်တွေထဲမှာနေနေရသလိုပါပဲ။
Sofitel Inle Myat Min
ညောင်ရွှေမြို့ထဲကနေ နာရီဝက်လောက်သွားရတဲ့ Sofitel Inle Myat Min မှာ တောင်တန်းတွေရဲ့အလှ ထင်ဟပ်နေတဲ့ အင်းလေးကန်ရေကို ငေးရင်း ရေကူးလို့ရတဲ့ Infinity Pool ပါပါတယ်။ Sunset ကြည့်လို့လဲ ရတယ်။ pool bar ကလည်း ဘေးကပ်လျက်ဆိုတော့ ရေကူးရင်း စားဖို့ သောက်ဖို့တွေ ပူစရာမလိုတော့ဘူး။ pool bar ရဲ့မြင်ကွင်းက တဖက်က တောင်တန်း၊ တဖက်က ကန်ရေပြင် feeling2မျိုးရတယ်။
A post shared by PASSPORT IN ONE HAND | TRAVEL (@laurandnicolas) on Feb 7, 2019 at 6:14am PST
ဟိုတယ်က မိုင်းသောက်ရွာနားမှာရှိပါတယ်။ စိမ်းစိုနေတဲ့ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတော့ ဒီကန်မှာရေကူးရင်း အေးမြတဲ့အရိပ်အာဝသအောက်မှာရေကူးရမှာပါ။ အင်းလေးကန်တစ်ဖက်ခြမ်းက တောင်တန်းတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲလိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်မှုပေးတယ်။
A post shared by 이하엘ʚɞ (@rooroo_ru) on Apr 29, 2019 at 3:38am PDT
Novotel Inle Lake Myat Min ဟိုတယ်က မိုင်းသောက်ရွာနားမှာရှိပါတယ်။ ရေကူးကန် Infinity Pool ကနေဆို အင်းလေးကန်တစ်ဖက်ခြမ်းက တောင်တန်းတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲလိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်မှုပေးတယ်။ ရေကူးရင်းနဲ့လည်း ဟိုတယ်တဝန်းလုံးကို အပေါ်စီးကနေလှမ်းမြင်နေရမှာပါ။ ဘေးမှာ Pool Bar လဲရှိတယ်နော်။
A post shared by Myat Noe Wai|Noe (@myatnoewai_mnw) on Nov 7, 2016 at 9:55pm PST
နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဟိုတယ်ကို ရွက်လွင့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်တဲ့ အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားမှုရရှိစေရန် ပုံဖော်ထားပါတယ်။ ကလေးရော၊ လူကြီးရော ၂မျိုးလုံး ရေကူးနိုင်အောင် ကန်ဘေးဘက်တွေကို ကလေးကန်သတ်သတ် အလယ်မှာ လူကြီးကန်သတ်သတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Zwekapin Valley Resort
Zwekabin Valley Resort & Spa က နာမည်နဲ့အလိုက် ဇွဲကပင်တောင်ခြေ၊ တောင်ကလပ်တွေကြားမှာ ရှိပါတယ်။ building အားလုံးရဲ့အလယ်မှာ infinity pool ရှိပါတယ်။ ရေကူးကန်က infinity pool ပဲဆောက်ထားတာပါ။ ရေကူးကန်ဘောင်ပေါ်မှာရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်တခုလုံးရယ်၊ ဇွဲကပင်တောင်ရယ်နဲ့ နောက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
A post shared by Zin Toe (@zin_toe) on Oct 25, 2019 at 9:10pm PDT
A post shared by Sónia Moreira (@soniadcmoreira) on Nov 9, 2017 at 4:22am PST
အလည်အပတ်မသွားဘဲ အေးဆေး ရေဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက် infinity pool ကြီးရှိသလို တခြားဘယ် Hotel တွေနဲ့မှ မတူတဲ့ Private ဆန်ဆန် Beach လေးရှိပါတယ် မြပြင်ဘက်လို သောင်မကျယ်ပေမယ့် ရေဆော့လို့တော့ရပါတယ်။